နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထောက်ခံပွဲ ဘိုကလေးမြို့၌ ကျင်းပ - Yangon Media Group
ဘိုကလေး၊ အောက်တိုဘာ ၂၉
နိုင်ငံ တော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ငြိမ်းချမ်း ရေးရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဘာသာ ပေါင်းစုံနှင့်ပြည်သူလူထုမှ ထောက်ခံပွဲအခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ ဘိုကလေးမြို့အောက်ပိုင်းပြည်သူ့အားကစားကွင်း၌ကျင်းပရာ အခမ်းအနားသို့ ပြည်သူ့လူထုအင်အား ၆ဝဝ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”လူထုက သူတို့ရင်ထဲမှာရှိ နေတဲ့ဆန္ဒကို ယနေ့ပွဲကနေ ထုတ် ဖော်ပြလိုက်တာပါ။ နိုင်ငံတော်အတွက် အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (တစ်နည်း) လူထုခေါင်းဆောင်နှင့်အတူ တစ် သွေးတစ်သားတည်းရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြသကြတာပါ။ ဒါကြောင့် မို့လည်း ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ပြည်သူ လူထုက ဦးဆောင်ပြီးလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ ဘိုကလေးမြို့ရဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါ” အခမ်းအနားဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ တာဝန်ခံဦးခင်ထွေးကပြောသည်။
ထောက်ခံပွဲအခမ်းအနားတွင် အစီအစဉ်အရပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံအား အလေးပြုခြင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းနှင့်တစ်ကွ အာဇာနည်ခေါင်း ဆောင်များအား အလေးပြုခြင်း၊ ခေတ်ဆက်ဆက်ကျဆုံးခဲ့သော ရဲ ဘော်များအား တစ်မိနစ်ငြိမ်သက် အလေးပြုခြင်း၊ ပညာရေးကောလိပ်မှ တိုင်းရင်းသားအကများဖြင့် ဖျော်ဖြေခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ် တော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) မှ ဦးအောင်ခင်ဗိုလ်က ထောက်ခံပွဲကျင်းပရခြင်းအကြောင်း ဆွေးနွေး တင်ပြခြင်း၊ ရဲဘော်ထွန်းကျော်(ခ) ထွန်းအောင်ကျော်က ခေတ်ဆက်ဆက်ဖြတ်သန်းမှုများနှင့် ယနေ့ ထောက်ခံပွဲအထိ ကြိုးစားခဲ့ကြပုံများ၊ ပြည်သူတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးအောင်ခင်ဦးမှ ထောက်ခံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် စာရေးဆရာဆရာထင်လင်းဦး (Wisdom Villa) မှ ထောက်ခံပွဲ အကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြကြ ကြောင်းသိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လာခဲ့ရသည့် မြန်မာအလုပ်သမား ၄၅ ဦးအား ကုမ္ပဏီမှ နစ်နာကြေးအဖြစ် တစ်ဦးလှ??
ဘင်္ဂါလီများ ပြန်လည် လက်ခံရေး လုပ်ငန်းစဉ် နှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်လွှားဖြတ်သန်းရန် ကြိုး?
ပေါ်တူဂီနှင့် ပွဲတွင် စီရော်နယ်ဒိုနှင့် နာချို ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်လို
တရုတ်တွင် ဝင်ငွေကောင်း အလုပ်ရမည်ဟု ဖြားယောင်းကာ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် ရောင်းစားခဲ့သူနှစ်ဦးကို ဖမ်းမိ
လားရှိုးတွင် မြို့တွင်းလှည့်လည် လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်
လွှတ်တော် ဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေ ကျပ်သိန်း ၁ဝဝဝ ဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားသည့် လုပ်ငန်းများ အချိန်မ?